Minnesota oo Mabnuucaysa Telefoonka Gacanta Xilliga aad Gaari Wadid – XOGMAAL.COM
Minnesota oo Mabnuucaysa Telefoonka Gacanta Xilliga aad Gaari Wadid
By Muriidi Baba	 On Mar 24, 2019
Aqalka Hoose ee gobolka Minnesota ayaa u codeeyey in la mabnuuco isticmaalka telefoonka gacanta marka gaari la wado. Sharcigan oo ay mudo sadex sano ah ka soo shaqeynayeen dad badan oo ay ka mid yihiin ehelada dadki u dhintey shillal baabuur oo ka dhashey masuulliyad darro ka dhalatey isticmaalka telefoonka xilli uu gaarigu socdo.
Sharcigan cusub waxaa codka siiyey 106 xildhibaan halka 21 ay ka soo horjeesteen. Lix iyo toban gobol oo Mareykanka ka mid ah ayaa mar mabnuucay isticmaalka telefoonka gacanta hadii aan gaariga ama wax kale lagu xirananeyn ee gacanta lagu qabanayo.
Inkasta oo aysan u baahneyn dardaaran iyo in sharci la meelmariyo midna, hadana waxa jireyso in dad badani aysan raalim ka noqoneyn sharcigan oo ay dood ka keeni karaan. Halka ay jiraan kuwo badan oo iyagu ogool la-aan iyo masuuliyad darraba wixi ku keena, sii wadan doono ku dhaqanka habkan qatarta leh.
Qoyskii lahaa Sarta Beexaani oo dib u hantiyay gurigooda (Sawirro)